တရုတ်စာရေးနည်း Part I
Chinese Letter Writing Course ဖြစ်တဲ့ တရုတ်စာရေးနည်းကို သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် Myanmar BOC မှ စုဆောင်းပေးထားပါတယ်။ Chinese Letter Writing တရုတ်စာရေးနည်းသင်ခန်းစာလေးက သင့်ကို အချိန်တိုအတွင်း တရုတ်စကားလုံးများ (Chinese Letters) ရေးတတ်စေရန် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Training Videos များကလည်း အချိန်2မိနစ် ဝန်းကျင်တာရှိတာကြာင့် လေ့လာရာမှာ မြန်ဆန်မှုရှိရှိ ထိထိရောက်ရောက် ရှိစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် Chinese Letter Writing Course ဖြစ်တဲ့ တရုတ်စာရေးနည်းကို အခုပဲ Enrollနှိပ်ပြီး Myanmar BOCနှင့်အတူ လေ့လောသင်ကြားလိုက်တော့နော် Myanmar BOCမှာသင်ကြားပြီးတော့အောင်မြင်မှု(success)ကိုရယူပါ။ Let’s go to success, start with Myanmar BOC…
Korea Language Basic ကိုရီးယားဘာသာစကားအခြေခံကို အခြေခံအဖြစ်သင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Korea Language Basic သင်ခန်းစာများကို သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် အခုဒီသင်ခန်းစာကို Enrollပြုလုပ်ပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ် Korea language Basic သင်ခန်းစာကို သင်ယူပြီး တတ်မြောက်သောသင်ခန်းစာကို အကျိုးရှိရှိ ပြောဆိုနိုင်ပါစေ။ သင်ခန်းစာကို မသင်ယူခင် Registerပြုလုပ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။ Registerပြုလုပ်ပြီးပါက မိမိသင်ယူလိုသည့်သင်ခန်းစာကိုသင်ယူနိုင်ရန် သင်ခန်းစာကို Enrollပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ Enrollပြုလုပ်ပြီးမှသာ သင်ခန်းစာကို သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရာတွင် အခက်ခဲရှိပါက ညာဘက်အောက်ထောင့်က အပြာရောင်Chat Headလေးကိုနှိပ်ကာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် တခြားသင်ခန်းစာများ- နှိပ်ပါ Our Facebook – Myanmar Web Store
အင်္ဂလိပ်စကားပြောကြမယ် (English Speaking)
February 19, 2020 /7Comments
Students: 1032 Students
English Tenses for everyone- လူတိုင်းအတွက် english tenses.. English စာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ လေ့လာသူအတွက် သင်ကြားနိုင်အောင် MyanmarBOCမှ စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ English သင်ခန်းစာများကို မိမိဖုန်းမှအင်တာနက်ဖြင့် အင်တာနက်မိသည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်း ညာဘက်အောက်ထောင့်က အပြာရောင်Chat Headလေးကိုနှိပ်ပြီး တိုက်ရိုက်(Live Chat)ဖြင့်လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အဆင်ပြေရင်လည်း မိမိသင်ယူတဲ့သင်ခန်းစာများကို ကြယ် ငါးပွင့် ⭐⭐⭐⭐⭐ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် SeeMore – Other Courses Like and follow our Facebook- Myanmar Web Store
Japanစာ N5 level ကို Learningလုပ်နေတဲ့ Myanmar Studentများအတွက် လေ့လာနိုင်အောင် စုစည်းထားပါတယ်ဗျာ Japanese N5 level Learning ကို ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Like Us Our Facebook- Myanmar Web Store Relatede Japanese Language Course- Daily Uses English
English-Myanmar စကားပြော -ဦးတိုးကြည်
ဦးတိုးကြည်သင်ကြားသော Myanmar to English စကားပြောများကို အခုပဲစသင်သင်ကြားနိုင်ပါပြီ Let’s start Myanmar to English Speaking right now. Myanmar to Englishသင်ခန်းစာများကို English အခြေခံမရှိသူများအတွက် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆို သုံးလ အတွင်းMyanmar to English ကိုလွယ်ကူစွာပြောကိုရမယ်လို့ ကျ နော်ကယုံကြည်သူပါ။ Myanmar to English သင်ခန်းစာတခုမပိုင်သေးပဲ Myanmar to english နောက်သင်ခန်းစားတခုကို မကျော်သွားဖို့တော့အ ရေးကြီးပါတယ်။ Related Course DailyUseEnglish Like Us Our facebook- Myanmar Web Store
နေ့စဉ်သုံး English စကားပြောများ
Daily Usage English Vocabulary in Myanmar Daily Usage English Vocabulary နှင့ျပတျသကျပွီးApplication ကို အောကျပါ link တှငျdownload ရယူနိုငျပါပွီ Click To Get Application နေ့စဉသြုံး English Speaking သငြ့၏နေ့စဉအြသုံးပှုမှုအတှကြ အထောကအြကူဖှဈစမှောပါ English Speakingသငကြို အခမဲ့ Enroll ပှုလုပပြှီးလေ့လာလိုကပြါဗွာ Related Course 1. ADVANCED ENGLISH VOCABULARY 2. ENGLISH LANGUAGE သငခွနွးစာနှင့ွ ပတသွကပွှီး Update ရနိုငရွနအွတှကွ Myanmar BOC facebook page ကို like လုပဖွို့ မမေ့ပါနှင့အွုံး။